baratakoolka socdaalka ardayda kaheshay deeqda waxbarasho jaamacadda ahgaff. | Almaschool's Blog
tafatiraha websitka sheikh hassan albasri Email xalbisri2@hotmail.com
baratakoolka socdaalka ardayda kaheshay deeqda waxbarasho jaamacadda ahgaff.
waxaa uu guddoomiyaha ururka ardayda ahlusunna waljamaaca ee jaamacadda ahgaff ee yemen sheekh xasan macalim maxamuud samatar shiikh xasan albasri ayaa ogaysinaya dhammaan ardayda dhawaan kaheshay qabuulka jaamacadda ahgaff in ay lasocdaan baratakooladaan soosocda oo wada muhiim ah .
1- in ardaykasta uu soodiro takhasuska uu rabo in uu kutakhasuso ama uu barto
2- waa in ay iskacayimaan ardayda kalajoogta gobalada dalka oo dhan hal amiir howsha safarkooda lawareego . oo lasooxiriiro maamulka ardayda sheekh hassan albasri
3- waa in ay ardayda ay sameestaan xafladda lagu maamuusayo socdaalkooda kahor inta aysan soobixin oo ay kuqabtaan iskuulka uu ardaygu kasoobaxay ama mowlaca iyo masjidka xerowga uu kasoobartay culuumta diinta waa haddii ay jiryo amni. si loofarxad galiyo bulsha waynta ahlusunna waljamaaca meelkasta oo ay caalamka joogaanba..
4- waa in horay ardakasta uu usooqaataa kitaabada culuumta uu rabo in uu kutakhasuso iyo qasiidooyinka diniga iyo waxkasta oo anfacaya ..
5- waa in ardayda ay aqristaan qur’anka iyo awraada si ilaah uu ugu sahlo safaradooda..
6- waa in la iskusooraacaa kooxo aan katirobadneen illaa iyo 10 arday kabadan waa laga fiicanyahay amniga somaliya iyo yemen.
7- waa in ardayda ay lasocaan marka ay helaan viisaha in ay usahlantahay safarka badda ee dhinaca boosaaso.
8- ardayda awoodda waxa ay ku imaankaraaan airaboorka cadan..
9- waa in ay lasocdaan http://www.almaschool.wordpress.com oo lagayaabo in dhawaan lasoogaliyo meesha ay taalo visaha iyo waxa la iskarabo..
10 waa in ardaygasta uu heesta telka guddoomiyaha ururka ardayda sheekh hassan albasri oo ah 967734543792 si ay ulasocdsiiyaan waxa jira .
Posted by daladda waxbarasho ee al-ma'muun on August 28, 2010 at 4:32 am
Previous Entry: ogaysiis muhiim ah
Next Entry: Bishaaro Bishaaro Bishaaro
machadka al-ma'muun Says:
waa uu kumhadsanyahay sheekh xasan albasri madaxa ardayda. waa in aan uwada duceenaa dhammaan wayo waxbadan ayuu noo ifiyay soomahan.
Posted on August 28, 2010 at 8:43 am
sawirada jaamacadda axgaaf
taariikhda macalim maxamuud shiikh xasan faarax
taariikhda shiikh macalim maxamuud sheekh xasan faarax .
halkaan kadhageeso subaca lagusubcinayo minhaajka imaam al-nawawi iyo xerta sheekh cismaan xidig.
websitka cusub ee ardayda somaliyeed ee yemen http://ahgaff.ahgaff.edu/ bishaaro bishaaro
guddoomiyaha ururka ardayda somaliyeed ..sheekh hassan albasri iyo talooyin muhiim ah oo kusoda ardayda deqda waxbarasho karajayneesa dhawaan jaamacadda ahgaff .
shuruudaha aqbalka deeqda waxbarasho ee jaamacadda ahgaff.iyo 2011
xaflad ballaaran oo kakoobneed al-israa wal-micraaj iyo 1-da luulyo iyo siyaarta macalim biya maalow iyo sheekh calisamatar ayaa lagu qabtay xarunta ururka ardayda somaliyeed ee jaamacadda ahgaff ee yemen
xafiiska ururka Midowga ardayda somaliyeed oo shir muhiim ah uqabtay ardayda qaarkood
DR shiikh hersi
sh.abuukar xasan malin
wariye axmad mahadi